यी १० नेपाली, जसले भारतमा तहल्का मच्चाए ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठफोटो फिचरयी १० नेपाली, जसले भारतमा तहल्का मच्चाए !
कुनै प्रतिभा केवल मार्गमा आउन ढिलाई भइरहेको हुन्छ, जब सहि बाटोमा पुग्छ त्यसपछि उसले आफैंलाई भेट्टाउँछ। हो नेपाली सिनेमा क्षेत्र कलिउडको बजार सानो छ। तर, कतिपय नेपाली कलाकारहरु छन् जसले अन्तराष्ट्रिय ख्याती कमाउन सफल भएका छन।
नेपाली फिल्म उद्योग सानो भए पनि नेपाली स्टारले आफ्नो प्रतिभाको आधारमा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका हुन। १० नेपाली सेलिब्रेटी जो बलिउडमा सफल रहे।
सुनिल थापा:नेपाली चलचित्रका प्रख्यात खलनायक सुनील थापा हिन्दी चलचित्रहरूमा पनि लोकप्रिय अनुहार बनेका छन्। राते काइलाका नामले प्रसिद्ध थापा मुम्बईमा मोडलिङ पछि अभिनयमा फर्के। उनले १९८१ मा फिल्म ‘एक दूजे के लिए’ बाट डेब्यु गरेका थिए।
त्यसपछि उनले धेरै हिन्दी र भोजपुरी फिल्महरूमा पनि काम गरे। सन् २०१४ मा आएको प्रियंका चोपडाको फिल्म ‘मैरी कॉम’ले उनलाई एक फरक चिनारी प्रदान गर्‍यो। त्यसमा उनले प्रियंकाको प्रशिक्षकको भूमिका खेलेका थिए।
तेरिया मगर::उनी सानी केटी हुन् जसले २०१४ मा नृत्य प्रतियोगिता ‘लिटिल मास्टर्स’को उपाधि जितेकी थिइन। उनी नेपालको रुपन्देही जिल्लाकी निवासी हुन्। तेरियाले ‘झलक दिखला जा सिजन ९’को उपाधी पनि जितेकी थिइन्।
उदित नारायाण झा: १९७०मा रेडियो नेपालमा मैथिली लोक गायकको रूपमा आफ्नो करियर शुरू गरेका उदित नारायण आज बलिउडका सबैभन्दा सफल गायक मानिन्छन्। उनी नेपालको सप्तरी जिल्लामा जन्मिएका थिए।
नेपाली संगीत क्षेत्रमा ८ बर्ष बिताएपछि झा बलिउडमा प्रवेश गरेका थिए। बलिउडमा उनले सन् १९८० देखि आफ्नो करिअर सुरु गरे। आज उदित नारायण अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिचित छन्।
माला सिन्हा:नेपाली-इसाई परिवारमा जन्मेकी माला सिन्हा परिचित कलाकार हुन। हिन्दी सिनेमाकी दिग्गज मालाले आफ्नो अभिनय करियर बंगाली फिल्मबाट शुरू गरेकी थिइन्। पछि उनले नेपाली चलचित्रहरूमा पनि काम गरिन। बिस्तारै उनी हिन्दी चलचित्रतिर गइन् र उचाइ चुम्न थालिन।
भोला राज सापकोटा:फिल्म ‘बर्फी’मा तपाईले रणबीर कपूरको साथीलाई याद गर्नुभएको छ? जो रणबीरको लागि आवाजका रूपमा काम गर्थे। उनी अरु कोही थिएनन् महान् नेपाली अभिनेता भोलाराज सापकोटा थिए। फिल्म २०१२ मा रिलीज भएको थियो।
उक्त फिल्ममा रणबीर बाहेक, इलियाना डिक्रूज र प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकामा छन्। भोलाले यस फिल्ममा सहयोगी भूमिका निभएका छन्।
मनिषा कोईराला:सुन्दर र प्रतिभाशाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आफूलाई एक लोकप्रिय बलिउड अभिनेत्रीको रुपमा स्थापित गरेकी छिन्। उनको परिचाय नेपालको उच्च घरानासँग सम्बन्धित छ।
मनिषाले आफ्नो आधा बाल्यकाल भारतमा बिताईन्। सुरुमा मोडलिङ गरेकी उनी त्यसपछि बलिउडमा प्रवेश गरिन्। ‘दिल से’, ‘सौदागर’ जस्ता धेरै हिट फिल्महरूमा मनिषाकोउत्कृष्ट अभिनय देख्न सकिन्छ।
पूर्ण‍िमा श्रेष्ठ:पूर्णिमा श्रेष्ठ बलिउडकी चर्चित पार्श्व गायक हुन्। उनलाई सष्मा श्रेष्ठका नामले समेत चिनिन्छ। उनले बाल कलाकारको रूपमा आफ्नो करिअर शुरू गरेकी थिइन्। १९७१ मा रमेश सिप्पीको फिल्म ‘अन्दाज’मा श्रेष्ठले, ‘मै हैना ना बोलो-बोलो’गीतमा आवाज दिएकी थिइन्।
त्यपछि ‘तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, क्या हुआ तेरा वादा’मा पनि काम गरिन्। श्रेष्ठले माधुरी दीक्षितको फिल्मको प्रसिद्ध गीत ‘चन्ने के खेत मे’ मा पनि आवाज दिएकी छिन्।
आदित्य नारायण झा:गायक उदित नारायणका छोरा आदित्य नारायण झा भारतमा जन्मिएका र हुर्केका कलाकार हुन। नेपाली परिवारमा जन्मेका आदित्यले बलिउडमा आफ्नो प्रतिभाको बलमा निकै ठूलो ख्याति कमाएका छन्।
उनले बाल कलाकारको रूपमा हिन्दी फिल्ममा काम गरेपछि गाउन थालेका थिए। आज उनी पनि सफल गायकहरूको श्रेणीमा पर्छन्।
झरना बज्राचार्य:काठमाडौंकी झरना बज्राचार्यले नेपालका धेरै सुन्दरी प्रतियोगिताहरूका उपाधी जितेकी छन्। उनले १९९७ मा मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। यस्ते उनले २००४ मा आएको फिल्म ‘लभ इन नेपाल’मा काम गरेकी थिइन्। जसमा सोनू निगम मुख्य भूमिकामा थिए।
उषा पौडेल:नेपालको जनकपुरमा जन्मिएकी उषा पौडेलले नेपाली चलचित्रमा काम गरिसकेपछि हिन्दी फिल्म उद्योगमा हात हालेकी थिइन्। धेरै संघर्ष पछि उनले बलिउडमा काम पाइन्। उनलाई ‘तुझ संग प्रीत लगाई सजना’, ‘जय जय जय बजरंग बली’, ‘अदालत’ जस्ता टिभी सिरियलमा देख्न सकिन्छ ।